सुदूरपश्चिमको बजेट ३६ अर्ब, राजमार्गमा सीसीटीभी जडान गरिने
अर्थ उन्‍नती चौधरी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
यस्तो छ बागमतीको ७० अर्बको बजेट (पूर्ण पाठ)
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ।
गण्डकी सरकारले ल्यायो ३५ अर्बको बजेट (पूर्ण पाठ)
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश १ को बजेट ३९ अर्ब, दूधमा अनुदानदेखि करमा छूट (पूर्ण पाठ) प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
मोटरसाइकल, स्कूटरको कर नतिरेकालाई बागमतीमा जरिवाना छूट बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु. ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
लुम्बिनी सरकारको बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
चार अर्ब घटाएर ल्यायो कर्णाली सरकारले बजेट (पूर्ण पाठ) कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सानो बजेट ल्याएको छ।
सात प्रदेशको कूल बजेट २ खर्ब ६२ अर्ब, सबैभन्दा ठूलो बागमतीको, सानो गण्डकीको सात वटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रू. २ खर्ब ६२ अर्ब २१ करोडको बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेका छन्। यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा केही थोरै हो।
प्रदेश २ को बजेट : ‘सांसद रिझाउने’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको प्रदेश २ को बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि र उपकरण खरीदका लागि रू.२० करोड विनियोजन गरिएको छ।
केन्द्रको गल्ती दोहोर्‍याउँदै प्रदेश २ सरकारः सुरेन्द्र लाभ, अर्थविद् अर्थमन्त्रीले होइन, कुनै मेसिनले पढे जस्तो यस वर्षको बजेट पनि पोहोर, परारको जस्तै छ। आकार पनि लगभग उस्तै। सबै कुरामा सन्तुलन ल्याउन खोजे जस्तो।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ३ अर्बले बढ्यो, प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४१ अर्बको बजेट ल्याएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा साढे ३ अर्बले बढी हो।
गण्डकीः परम्परागत बजेटकै निरन्तरता कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट प्रदेशको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा वितरण र लोकप्रियतामै केन्द्रित देखिन्छ।
‘यो बजेटले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि नयाँ कुरा दिन सक्दैन’